SP-G75 120ml Girazi Rinokosha Oiri Aromatherapy Diffuser, China SP-G75 120ml Girazi Rinokosha Oiri Aromatherapy Diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Maindasitiri Limited
Model Number: SP-G75
Packaging Details: 24 Zvidimbu / katoni
120ml Girazi Rinokosha Oiri Aromatherapy Diffuser
1.7 Inozorodza Mwenje wechiedza: Ruvara runogona kuchovhareswa kuburikidza kana kuriseta kune imwe yakatarwa kara, Chiedza chakakwana chehusiku chevane yekurara uye yemwenje mwenje yekugadzira yemweya mamiriro.
2.Safe use uye mhute kuburitsa: Isu tinoshandisa PP neABS kugadzira diffusers. Hapana bpa, hapana zvinhu zvine chepfu. Zvinhu izvi zvakafanana nemabhodhoro evana, chengetedza zvinoshanda zvemafuta anokosha. Iwo madiki, ari nyore kutakura Diffuser ane tangi remvura inokwana 120ML. Wedzera 2-3 madonhwe echinhu kumvura anogona kuwana aromatherapy maitiro. Inoshanda uye ine mari.
3.Chipo Chinonyanya Kufunga Chokugadzira: Iyi girazi aromatherapy diffuser ine dhizaini yakasarudzika, inounza kushamisika kuhama dzako neshamwari, ngavazorore uye vanakirwe nemhedzisiro yekurapa kwearomatherapy nemafuta akakosha.
4.Safe & Auto-kure: Yakavakirwa-mukati memwero yemvura sensor, otomatiki kudzima kana iyo mvura nhanho yakaderera pane yakachengeteka nhanho, chengetedza hupenyu hwakareba hwekushanda.
zvinhu Girazi + ABS + PP
chiedza Akajeka mwenje wechiedza
Mistu Vhoriyamu 30-35ml / h
Nguva Yokupedzisira 4-6hours
Saizi yeyuniti Φ130 * 240mm
Unit uremu 800g
Ruvara rwebhokisi saizi 147 * 147 * 290mm
Ukuru hweCarton 46.5 * 34.5 * 55CM
NW / carton 12 Madzimabo
GW / katoni 13kgs
SP-G63 120ml Hollow-Yakavezwa Craft Aromatherapy Diffuser
SP-L28 300ml ceramic bhaudhi mutauri weApp control ultrasonic inonhuhwirira
SP-E001 30ml huni ceramic nebulizer isina mvura yakakosha mafuta diffuser